Sakoroka tao Toamasina: nidina an-dalambe ny mpivarotra, niraraka ny lakrimozena sy ny tora-bato | NewsMada
Sakoroka tao Toamasina: nidina an-dalambe ny mpivarotra, niraraka ny lakrimozena sy ny tora-bato
Hoe noho ny amboletra ataon’ny ben’ny Tanànan’i Toamasina I, hivarotra ny tsenan’Ankirihiry no nahatezitra ireo mpivarotra marobe nanao fihetsiketsehana, nidina an-dalambe, omaly. Raikitra ny sakoroka, raikitra ny tora-bato, nitora-jofo ny grenady lakrimozena.
Raikitra indray ny korontana tany Toamasina,omaly, noho ny olana eo amin’ny mpivarotra sy ny kaominina. Nirefodrefotra ny baomba mandatsa-dranomaso nanaparitahana ireo olona marobe. Ireto farany tsy niala fa namaly tamin’ny tora-bato. Nangotraka ny fifandonana ka nisy ny zandary voatora-bato, hatramin’ny ankizy sy ny mpanao gazety. Tsy nanaiky raha tsy tonga teny amin’ny lapan’ny Tanàna ireo mpanao fihetsiketsehana. Niezaka nampitony ny olona ireo birao vovonan’ny fikambanan’ny tsena eto an-drenivohitr’ i Toamasina, notarihin’ny filohany, Atoa Ratsimbazafy Jean Prosper.
Vao maraim-be omaly, tamin’ny 5 ora, efa tomefy teo amin’ny tsenan’Ankirihiry ireo mpivarotra avy amin’ny vovonan’ny fikambanan’ny mpivarotra rehetra misy ao an-tapon-tananan’ i Toamasina, vonona hanohitra ny fivarotana tsena ataon’ny ben’ny Tanànan’ i
Toamasina, Ratsiraka Elysé.
“Rehefa tsy esorin’ny fitondrana Hvm ny ben’ny Tanana, Ratsiraka Elysé sy ny forongony ao amin’ny lapan’ny Tanàna, toy ny talen’ny tsena ary talen’ny fiarovana ny ben’ny Tanana,hitroatra izahay”, hoy ny olona teny an-toerana.
Tamin’ny 8 ora maraina, niatomboka ny fanentanana ary samy nilaza fa hihazo eny amin’ny lapan’ny Tanàna. Nitanjozotra ireo olona marobe, raha niezaka nanao izay fomba nisakanana izany kosa ny mpitandro filaminana. Kapokapoka sarom-bilany sy kiririoka no
nentin’ ireto mpivarotra nandravaka ny diabeny, na teo aza ny fandrahonana hanesorana azy ireo amin’ny toeram-pivarotany.
Tamin’ny 9 ora sy 15 minitra, tsy nahaleo ny firohotry ny hamaron’ny olona kosa ny mpitandro filaminana, ary raikitra niatomboka teo ny fitorahana tamin’ny alalan’ny baomba mandatsadranomaso izay naharitra hatramin’ny 15 minitra, mba hanaparitahana ny olona, saingy tsy nampihemotra azy ireo izany.
Tsy manaiky ireo mpivarotra
Nikatona avokoa ny tsena rehetra tao an-drenivohitr’ i Toamasina. Niezaka nampitony ny olony ireo mpitarika. “Nataonay izao hetsika izao satria lazain’ny ben’ny Tanàna fa tsy vahoaka ny mpivarotra fa olom-bitsy izahay, ka olom-bitsy tokoa ve ireny”, hoy ny filohan’ny vovonan’ny mpivarotra. Nohamafisin’ny filohan’ny tsena tsirairay kosa fa noho ny
taratasy nalefan’ny ben’ny Tanàna fa raha tsy miala ny alakamisy ny mpivarotra, hotrongisiny amin’ny buldozer ny tsena rehetra ka izay antony izay no nahatonga izao hetsika izao.
Tsy misy idiran’ i David
Fa tsy niandry ela kosa satria voatonontonon’ny mpivarotra mitokona ny anaran’ ity mpandraharaha iray antsoina hoe David, nampiantso valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tamin’ny alalan’ny mpisolovavany ary notronon’ ireo filohan’ny fikambanan’ny
mpivarotra ihany koa, omaly tamin’ny 12 ora antondro . Nambaran’ny Maitre, Ratiarison Ginot, fa tsy misy hidiran’ny olona harovany intsony io filazan’ny kaominina fa hanamboatra ny tsena ao Ankirihiry sy Valpinson ary ny ao Ambolomadinika sy ny ampahany Bazary kely, efa vita tamin ‘io « bloc commercial » ao bazary kely ny fifanarahana nataon’ i David tamin’ny
kaominina. “Tsy tompon’andraikitra amin’ izay famarotana na fanelingelanana mpivarotra eto
Toamasina, ny mpandraharaha izay harovako”, hoy ny mpisolovava an’ I David. Ankilany kosa, tamin’ny 1 ora sy 30 minitra, nampiantso mpanao gazety ihany koa tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna, ny ben’ny Tanànan’ i Toamasina, Ratsiraka Elysé. Ity farany izay nilaza fa an’ny kaominina ny tany ka mivarotra ihany no ataon’ny mpivarotra eo aminy ary tsy maintsy hanatsara ny tsena eto Toamasina, izy ireo.